श्रमजीवी र स्वतन्त्र नागरिकलाई उकुसमुकुस् « Janata Samachar
श्रमजीवी र स्वतन्त्र नागरिकलाई उकुसमुकुस्
देशको एउटा सचेत नागरिकले राष्ट्रिय हितमा र आम जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्छ । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ तर आज मान्छे आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो समेत भन्ने गरेको देखिएकाे छ । यस्तो क्रियाकलापले अराजकतालाई मलजल गर्दछ । जोसँग द्वन्द्व हो उसैलाई नोक्सान पुर्‍याउन खोज्नु ठिकै होला, तर यहाँ शासन चलाउनेहरुसँगको द्वन्द्वको बदला आम नेपाली नागरिकसँग लिने गरेका छन् । दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेसँग, श्रम गरी खानेहरुसँग किन ? यो प्रश्नको उत्तर कोसँग छ ? मिलेसम्म मिलेर खाने र भागबन्डा तलमाथि हुनासाथ सडमा बन्द हड्ताल, तोडफोडमा उत्रने आम नागरिकलाई दुःख कष्ट दिने नेपाली राजनीति फेरि सुरुवात भएको छ ।
कोरोना महामारीको कारणले लामो समय अस्त व्यस्त व्यापार व्यावसाय फेरि संकट देखिन सुरुवात भएको छ । आज एउटाले बन्द गर्यो भोलि फेरि अर्कोले पनि नगर्ला भन्न सकिन्न । यत्रो लामो समय व्यापारी व्यावसायीहरुमा परेको मर्का बारेमा आवाज उठाउने कोही नभएपनि बल्ल बल्ल सुचारू व्यावसाय फेरि जबर्जस्ती बन्द गराउनेहरुलाई भने धन्यवाद दिनैपर्छ । कस्तो अचम्म ! राष्ट्रिय हितका विषयमा, सुशासनका विषयमा, नागरिकहरुका निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा, स्वदेशमै रोजगारीका विषयमा, निश्पक्ष न्याय, विधिको शासन, नागरिकको मौलिक अधिकारलाई सम्मानका पक्षमा कहिल्यै बन्द हर्ताल हुँदैन, कतै कहिल्यै आवाज उठेको सुनिदैन । तर सत्ता भागबन्डामा तलमाथि हुनासाथ अस्तव्यस्त हुन्छ, नेपाल बन्द हुन्छ । मिलेर खान पाउँदासम्म न संविधान, न नीति नियम, न विधान केही आवस्यक पर्दैन । जब तलमाथि सुरु हुन्छ अनि सबै कुरा आउँछ ।
मुलुकमा यत्रो लामो राजनीतिक गतिविधिले स्पष्ट भनेको छ राजनीति एउटा व्यापार हो । सत्ता र शक्तिमा बस्ने आफू कमाउने, आफ्ना परिवार बनाउने, आफ्ना आफन्त बनाउने त्यो भन्दा केही देखिएन । कहिल्यै राष्ट्रिय हितका विषयमा सोच्ने फुर्सद भयो ? कहिल्यै आम गरिब नागरिकहरुकम जनजिविकाका विषयमा आवाज उठाउनुभयो ? यस्तो राजनीति गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई साथ सहयोग र समर्थन गर्ने कार्यकर्ता देखेर झन् दया लाग्छ, कति सचेत रहेछन् कार्यकर्ता भनेर ।
कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाको फाइदा उठाएर जबर्जस्ती गरिएको नेपाल बन्दलाई आफ्नो समर्थनमा गरिएको बन्द कहिल्यै नसोच्नु होला । राजनीतिक दलहरुले एउटा हेक्का के राख्न जरुरी छ भने यो मुलुकमा सबै राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता मात्रै छैनन् नागरिकहरु पनि छन् तर ती नागरिकहरु उकुसमुकुसमा छन् । राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ तर राज्यबाट लिने सेवा सुविदा भने पाउँदैनन् । जुन पार्टीको सरकार छ उसले हालिमुहाली गर्छ । रोजगार मात्रै होईन अनुदान समेत पाउन सक्दैन उसले । किनभने भन्सुनबिना केही चल्दैन । राजनीतिभन्दा बाहिर बस्ने स्वतन्त्र नागरिकको ठूलो पीडा हो यो ।
कुनै ठाउँमा रोजगारका लागि, अनुदानका लागि, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि समेत नेताहरूलाई भन्सुन् गर्नुपर्छ तर स्वतन्त्र नागरिकहरुका लागि यो पहुँच बाहिरको कुरा हो । हुन त देशमा नागरिकहरुलाई विभिन्न आश्वासनहरु बाँडेर उनीहरुलाई प्रयोग गरेर व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर त्यसको फल सिमित व्यक्तिहरुले लिए । सर्वसाधारण नागरिक जस्ताको तस्तै । जालझेल, छलकपट, झुटा आश्वासनको राजनीतिबाट देश मुक्त होस् ।
मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेलले एक महिनामा एक लाख २८ हजार सङ्क्रमित बढेको जानकारी
आज (मंगलबार) अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दिएको जानकारी अनुसार पूर्वराजा शाहको २ दिनअघि पुनः